इन्डियाले निकाल्यो अर्को नयाँ नक्सा- फेरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा इन्डियन भू-भागमै !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
इन्डियाले निकाल्यो अर्को नयाँ नक्सा- फेरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा इन्डियन भू-भागमै !
नेपालको भू-भागमाथि निरन्तर अतिक्रमण गर्दै आएको भारतले लिम्पियाधुरामा मिचेको नेपालको सीमालाई थप औपचारिकता दिन पुनः अर्को षडयन्त्र गरेको छ । नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामाथि बर्षौदेखि कब्जा जमाउदै आएको भारतले हिन्दी र संस्कृत भाषामा प्रकाशन गरेको आफ्नो पछिल्लो नक्सामा पनि ती क्षेत्रहरुलाई आफ्नैमा समेटेको छ ।
शुक्रबार जारी गरेको नक्सामा भारतले कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग प्रष्टसंग भारतकै भएको दावी गरेको छ ।
भारतले जारी गरेको नक्सालाई लिएर नेपाल भित्र चर्को विरोध भयो । सरकारी स्तरबाट नै विरोध पनि जनाइयो तर नेपालको विरोधलाई भारतले नसुन्ने प्रष्ट पारेको छ पछिल्लो पटक जारी गरेको नक्सामार्फत ।
शुक्रबार भारतको सर्वे विभागले जारी गरेको हिन्दी भाषाको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतको भूमिमै पर्ने गरी प्रष्टसंग देखाइएको छ ।
संस्कृत भाषामा जारी गरिएको भारतको अर्को नक्सामा पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक उसैको नक्साभित्र समेटिएको छ ।
गत कात्तिक १४ गते संविधानको एउटा व्यवस्था परिवर्तन गरेर जम्मू–कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले जारी गरेको नक्साले नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको थियो ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दूमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रुपमा समावेश गरियो ।
लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नक्सालाई मानचित्र माथिको आक्रमण (क्यास्टोग्राफिक एग्रेसन) भनिएको छ । त्यस लगतै नेपालले विज्ञप्ती निकाल्दै भारतको नयाँ नक्सा मान्य नहुने जवाफ दियो ।
कालापानी सहितको भूभाग सुगौली सन्धिपछि आफ्नै भएको दाबी ग-यो । अझ काली नदीलाई समेत उल्लेख गरेपछि काली नदी नै सिमाना भएको नेपालले बतायो । त्यसको केहीदिनपछि भारतले काली नदी नै हटाएर उही नक्सा जारी ग-यो ।
आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न देश भित्र दबाब बढेपछि सरकारले भारतस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई भारतीय अधिकारीहरु भेट्न पठाएको थियो ।
राजदूत आचार्यले कात्तिक २३ गते तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेसँग भेटवार्ता गरेर नेपालको असन्तुष्टि प्रष्टसंग राख्नु भएको थियो ।
त्यसलगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २४ सर्वदलीय बैठक बोलाएर आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन एकजुट भएको सन्देश दिनु भएको थियो । त्यसपछि नेपालले एउटा ‘नोट’ पठाएर वार्ताका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह ग-यो ।
वार्ताका लागि भारतले सकारात्मक भनेपनि अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता हुनसकेको छैन । अहिले न त भारतले वास्ता गरेको छ न त नेपालले पुनः पहलको प्रयास गरेको छ ।
बरु सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद बढेको छ । यसैबीचमा भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नै भूमि भएको भन्दै पटक–पटक नक्सा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
अहिले सीमा मिचिएको विषयमा कसैले पनि प्रश्न उठाउनै छाडेका छन् ।
-न्युजट्वान्टी फोर नेपालबाट
BREAKING NEWS एसईई परीक्षा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित
देशको सिमा रक्षाकालागि भारतको अतिक्र’मणमा परेको कालापानी हिँड्यो सशस्त्र प्रहरी
युएईको नेपाली दुतावासले गल्ती लुकाउन स्थानीय कर्मचारी निस्काशन गरी सुटुक्क नेपाल पठायो
नेपालमा कोरोनाको आंशका लागे यसरी हुन्छ परीक्षण, रविको ‘स्टिङ अपरेशनमा ७ जना माक्स तस्करी समातिए (भिडियो)
कालापानी क्षेत्रका विदेशी सेना हटाउने प्रस्ताव